people Nepal » राशिफल : कार्तिक ५ गते / अक्टोबर २२ तारिख आइतबार राशिफल : कार्तिक ५ गते / अक्टोबर २२ तारिख आइतबार – people Nepal
राशिफल : कार्तिक ५ गते / अक्टोबर २२ तारिख आइतबार
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल कार्तिक ५ गते आईतबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर २२ तारीख कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथी चन्द्रमा बृश्चिक राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु
मेष राशि : चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नजिकका ब्यत्तिहरुबाट बिश्वास घात हुन सक्नेछ । स्थान परीर्वतनको योग रहेकोछ । मनमा उत्पन्न बिभिन्न शंका उपशकांका कारण मानसिक चन्चलताको सामना गर्नु पर्नेछ । नयाँकार्य सम्पादन गर्न गोप्यताको आवश्यक रहनेछ ।
बृष राशि : इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य घाटा आईपर्न सक्नेछ । सामान्य कार्यका निम्ती अधिक श्रम खर्चनु पर्ने योग रहेको छ । कुनैपनि कार्य सम्पादनमा अरुको दवावको महसुस हुन सक्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य खटपट उत्पन्न हुनाले मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ । शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ ।
मीथुन राशि : का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
तपाई द्वारा सम्पादीत कार्यको प्रशंसा गर्नेहरु बढ्नेछन । प्रतिश्पर्दा मुलक कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त हुन सक्नेछ । स्वास्थमा भने सामान्य समस्या आईपर्ला । अरुको प्रशन्नताका लागी सामान्य खर्च गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । अप्रीय खवरका कारण मानसिक स्थीती निर्उत्साहित बन्नेछ ।
कर्कट राशि : हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
बौधिक ब्यक्तित्व सँगको भेटघाटले मन हर्सित तुल्याउला । पठनपाठनको क्षेत्र भने अधुरो रहनेछ । पारीवारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ ।
सिंह राशि : मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । प्रतिस्ठीत ब्यक्तिहरुको सहयोग प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहेतापनि अरुको अनुशरण गर्दा प्रिय ब्यक्तिहरु टाढीन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
कन्या राशि : टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
सामान्य यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर रहनेछ । पराक्रममा बृद्यि हुनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । कुराकाट्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ ।
तुला राशि : र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
खानपानको गडबढीले स्वास्थमा सामान्य बाधा आउन सक्छ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् । दीर्घकालिन फाईदा मुलक काममा लगानि लगाउने राम्रो समय रहेको छ तर तत्कालिक आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ ।
बृश्चिक राशि : तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
आम्दनी बृद्वि हुने योग रहेको छ । मनमा सामन्य चिन्ता ले सताउने छ । साजेदारी काममा हात नहाले कै बेस रहने छ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । प्रेमी प्रेमीका बिच खट्पट रहन सक्छ । सामान्य यात्राले मन बैचैन रहला ।
धनु राशि : ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
तपाईले गरेको कामको फाईदा अरुले लिन सक्छन् । मित्रजनहरुको लागी साधारण खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खराब संंगतको कारणले सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्यतय हानि रहन सक्ने छ । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ ।
मकर राशि : भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
आय आर्जनको लागी राम्रो समय रहेको छ । हरकोहिको पुर्ण बिश्वास नगनु होला धोका हुन सक्छ । बाणिमा मधुरता छाउनेछ । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ ।
कुम्भ राशि : गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
कार्य सम्पादन गर्न बढी परीश्रम र समय ब्यतित हुन सक्छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा चन्चलताको बास रहला । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । कष्टकर यात्राको कारणले शारिरिक आलस्यता ले सताउला । पठनपाठनको क्षेत्र भने त्यति राम्रो नरहला ।
मिन राशि : दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
दाजु भाई तथा मित्रजनको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । यात्राकारक दिन रहेकोछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ ।